News | अभिनेत्री
News | Tag: अभिनेत्री
अभिनेत्री सुपुष्पा भट्टका बोल्ड तस्बिरहरु
काठमाडौँ । नेपाली फिल्म जगतमा पछिल्लो समय चर्चा रहेकी अभिनेत्री हुन् सुपुष्पा भट्ट ।
ड्रग्स खरिद गर्दैगर्दा एकजना अभिनेत्री पक्राउ
एजेन्सी । अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्युपश्चात अगाडि आएको ड्रग्स केशका कारण बलिउडका कैयौँ कलाकारहरुको भित्री रहस्य बाहिर आएको थियो । बलिउडका कतिपय कलाकारहरुले ड्रग्स खरिद गरेको आरोप पनि लाग्दै आइरहेको छ ।
बलिउडका कतिपय अभिनेत्री ६ कक्षा पनि पास छैनन्
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्रीहरु कसले कति पढेका छन् ? योबारे जो कोही जान्न चाहन्छ । पढाइमा खासै अब्बल नभएपनि अभिनय क्षेत्रमा अब्बल रहेका बलिउड अभिनेत्रीहरु निकै चर्चामा रहेका छन् ।
यो देशमा छोरीहरु सुरक्षित छन् ?
एउटा अभिनेत्री बाहेक, यो देशलाई माया गर्ने चेली, एउटा नारी भएकोले हिजोआज आफैलाई लाज लाग्न थालेको छ, डर लाग्न थालेको छ, मन आत्तिन थालेको छ। ती अबोध बालिकाहरूको कल्पना मात्रैले पनि छाती पोलेर आउँछ ।
यी हुन् जेल बस्ने बलिउडका चर्चित अभिनेत्रीहरु
२७ वर्षिया अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जीको निधन
एजेन्सी । बलिउड तथा बंगाली फिल्मकी अभिनेता मिष्ट मुखर्जीको २७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । केही बलिउड फिल्ममा काम गरेकी उनी बंगाली फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री हुन् ।
अभिनेत्री वर्षा राउतबारे रोचक कुराहरु